Wargeyska Foreign Policy : Muslimiin badan oo qaadacay Xajka Maxamed Bin Salmaan Awgiis iyo dilkii loo gaystay wariye jamaal kashooqi | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wargeyska Foreign Policy : Muslimiin badan oo qaadacay Xajka Maxamed Bin Salmaan...
Wargeyska Foreign Policy : Muslimiin badan oo qaadacay Xajka Maxamed Bin Salmaan Awgiis iyo dilkii loo gaystay wariye jamaal kashooqi
Inkasta oo dhaxalsugaha Sucuudiga Maxamed Binu Salmaan uu isku dayayaa in uu wanaajiyo wajiga iyo fikradda laga heysto boqortooyada Sucuudiga, balse ma ahan arrin ku filan in ay qanciso dad badan.
Dad muslimiin ah oo tiradooda isa soo tarayso ayaa ku baaqaya in la qaadoco aaditaanka xajka oo ka mid ah tiirarka Islaamka, sababtoo ah waxa ay ku doodayaan in lacagta uu Sucuudiga ka sameeyo xajka uu u isticmaalo dagaalada Yemen ee dadka badan ku dhamaadeen iyo meelo kale.
Sida ay qoreyso majaladda Foreign Policy, dadka ku baaqaya waxaa ka mid ah mustiga reer Liibiya ee suniyiinta dalkaas madaxda u ah Sadiiq Al-Qariyaani iyo Sheekh Yuusuf Al-Qardhaawi.
Sheekh Qardhaafi ayaa yiri “Quudinta muslimiinta baahan, daweynta bukaanka, iyo siinta hoyga ee dadka ayaa xag Alle ku qiimo badan halkii lacagta Xajka lagu bixin lahaa”.
Mid ka mid ah waxyaabaha muslimiinta sida weyn uga xumaadeen ayaa ah dilkii foosha xumaa ee loo geystey wariyihii Jamaal Khaashuqji.
Awoodda Sucuudiga oo kaliya kuma tiirsana shidaalka iyo quwadda militari ee ay leedahay, balse sidoo kale waxa ay ka heleysaa saameynteeda diimeed, iyada oo sannad kasta ay dalkaas xajka u tagaan labo malyan iyo saddex boqol oo kun oo muslimiin ah iyo kuwa kasii badan oo u taga cumrada.
Tan waxa ay keentay in muslimiinta adduunka intiisa badan ay Sucuudiga ugu tiirsanaadaan fatwooyinka diinta iyo waliba faafinteeda.
Markii uu kacaanka islaamka ka dhacay Iran 1979-kii, Sucuudiga waxa ay biloowday mashruuc balaaran oo ay adduunka ugu faafinayso mad-habteeda iyo fahamkeeda gaarka ah ee diinta Islaamka, waxaana ku baxday balaayiin doolar.
Sidoo kale Sucuudiga waxa ay muddo dheer isku dayaysay in ay noqoto dalka ugu awoodda badan ee Bariga Dhexe, balse waxaa taas lid ku noqday dowladda Iran oo kaliya.
Gabood falada uu Sucuudiga geysto ayaa keenay in Maraykanka iyo Ingiriiska ay wax ka badelaan heshiisyadii ay hubka uga gadayeen Sucuudiga, gaar ahaan hubka casriga ah.
Fatwada Sheekh Al Qaryaan wax badan ayay kaga duwantahay kuwii hore, waxa hadda si wadajir ah u aqbalaya dad ku kala duwan madaahiibta islaamka, oo sunni iyo shiicaba isugu jira.
Olole laga bilaabay baraha bulshada, gaar ahaan Twitter-ka ayaa waxaa hal qabsi looga dhigay #HalaQaadocoXajka, waxaana lasii faafiyay wax ka badan 16 kun oo jeer.
Bishii June, ururka suniyiinta dalka Tunisia ayaa ku baaqay in la qaadoco xajka, iyaga oo ku dooday in lacagta cibaadada lagu soo guto ay ku dhacdo jeebka boqortooyada, waxayna doontana ay ku samayso.
Sannad kasta waxaa boqortooyada Xajka kasoo gala $12 bilyan oo doolar, taas oo ah boqolkiiba 20% daqliga dalkaas ee aanan shidaalka ka imanin.
Sucuudiga laftiisa ayaa siyaasadaynaysa arrimaha xajka, waxayna dhowaan Makka ka hor istaagtay muwaadhiniinta Qatar iyo Iran kadib khilaafkii dublamaasiyadeed ee dalalkan ka dhex qarxay.
Mid ka mid ah Imaamyada Xaramka Sheekh Cabdiraxmaan Sudeys ayaa isaga oo khudbad jeedinaya sannadkii hore sheegay in aysan banaanayn in dadka muslimiinta ah ay ka hor imaadaan dhaxalsuge Maxamed Bin Salmaan.
Previous articleDaawo, Qaabilaada sare ee lagusoo Dhaweeyay Madaxwaynaha jamhuuriyada Somalilnd oo Marti qad rasmi ah ka Helay wadnka Gini
Next articleMadax-dhaqameedka Somaliland oo Xukuumada Ugu Baaqay Inay Koomiishaanka Kala Dirto